ရိုင်းပြခြင်းဟာ ကူးစက်တတ်ပါသလား – Gentleman Magazine
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရိုင်းပြမှုတွေ၊ စွပ်စွဲမှုတွေကို အချိန်တိုင်းလိုလို ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ အဲဒိအကျင့်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ခွင်နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြစ်တွယ်နေပါပြီ။ မေးစရာရှိတာက အဲဒိအကျင့်တွေက ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သလဲ??
မကောင်းတဲ့ အမူအရာတွေဖြစ်တဲ့ စိတ်မြန်ခြင်း၊ ဒေါသကြီးခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်းတို့ဟာ အန္တရာယ်ရှိတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုင်းစိုင်းပြီး ယဉ်ကျေးမှူမရှိတာက ဘယ်လို အန္တရာယ် ရှိပါသလဲ??
လေ့လာမှုတွေအရတော့ ရိုင်းစိုင်းမှုကို ခံစားရတာ၊ အနည်းဆုံး ရိုင်းစိုင်းမှုကို မျက်မြင် တွေ့နေရတာကတောင် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ တီထွင်ဉာဏ်နဲ့ အကူအညီပေးလိုမှုတို့မှာ အရမ်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါနဲ့တင် အဆုံးမသတ်သေးပါဘူး။
ရိုင်းစိုင်းမှုဟာ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ရိုင်းစိုင်းခြင်းဟာ ရိုင်းစိုင်းမှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရသူ၊ ရိုင်းစိုင်းမှုကို မျက်မြင်တွေ့ရသူတွေကိုသာ အကျိုးသက်ရောက်စေတာ မဟုတ်ပဲ ဆင့်ပွားအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူ ကြုံခဲ့ရသူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရိုင်းစိုင်းသွားကြပြီး သူတို့နဲ့ ထပ်မံတွေ့ဆုံရတဲ့ လူတွေအပေါ်ပါ ရိုင်းနေဦးမှာပါ။
ဘာကြောင့် ရိုင်းစိုင်းမှုက တစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက် ကူးစက်ကြတာလဲ
စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ အပြုအမူတွေက ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ ပျော်နေရင် သင်လဲ ပျော်လာမှာပါ။ ပါတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံး လက်ပိုက်နေရင်၊ ဒူးနှံ့နေရင် သင်လဲ လိုက်လုပ်မိမှာ အသေအချာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက သင် အမှတ်တမဲ့ လိုက်လုပ်မိတာပဲဆိုတော့ ရိုင်းစိုင်းမှုက ဘာကြောင့် သင့်ကို ပိုရိုင်းစေလဲဆိုတာ ပြောမပြနိုင်ပါဘူး။ အဲဒိတော့ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ??
သင် လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှု တစ်ခုခု လုပ်တဲ့အခါ ( ဥပမာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ) ဦးနှောက်ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ မသိစိတ်အပိုင်းမှာရှိတဲ့ အသိတစ်ချို့ကို လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒိ အသိဆိုတာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒေါသ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ခွန်အားနဲ့ ရိုင်းစိုင်းခြင်းတို့ပါ။ အဲဒိ အသိတွေ ပွင့်လာတာကို ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိပါဘူး။ အဲဒိ အသိတွေထဲက တစ်ခုခု ပွင့်လာရင် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံလဲ အသိနဲ့ လိုက်ပါပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသိ ပွင့်လာရင် သင် ခံစားရတဲ့ လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုကို ပိုပြီး ရိုင်းတယ် ထင်လာမှာပါ။ ရိုင်းစိုင်းမှု ခံစားရတဲ့ သူတွေဟာ ပါတ်ဝန်းကျင်က ရိုင်းစိုင်းမှုတွေကို ပိုမို သတိပြုမိလာကြပြီး တစ်လောကလုံးက သူ့ကို ရိုင်းနေတယ်လို့ ထင်လာကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ကလဲ တုံ့ပြန်ရိုင်းစိုင်းလာရတာပါ။
အဲဒိ ဖြစ်စဉ်က အလိုအလျောက် ဖြစ်တဲ့အရာမို့ ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတာပါ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ အလိုလို ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို သင် ဘာမှ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။
တစ်ခုတည်းသောနဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင် ဘာပဲ ကြုံရကြုံရ မရိုင်းပါနဲ့။ သင့်ကို လူအားလုံးက စော်ကားနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုင်းစိုင်းသူတွေနဲ့ မဆက်ဆံပါနဲ့။ အရိုင်းခံရရင်တောင် ပြန်မရိုင်းဖို့ ကြိုးစားပါ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ရိုငျးပွမှုတှေ၊ စှပျစှဲမှုတှကေို အခြိနျတိုငျးလိုလို ကွုံတှနေ့ရေတာပါ။ အဲဒိအကငျြ့တှဟော ကြှနျတျောတို့ အလုပျခှငျနဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ အမွဈတှယျနပေါပွီ။ မေးစရာရှိတာက အဲဒိအကငျြ့တှကေ ကြှနျတျောတို့အပျေါမှာ ဘယျလို အကြိုးသကျရောကျစနေိုငျသလဲ??
မကောငျးတဲ့ အမူအရာတှဖွေဈတဲ့ စိတျမွနျခွငျး၊ ဒေါသကွီးခွငျး၊ ကွမျးတမျးခွငျးတို့ဟာ အန်တရာယျရှိတာ ထငျရှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရိုငျးစိုငျးပွီး ယဉျကြေးမှူမရှိတာက ဘယျလို အန်တရာယျ ရှိပါသလဲ??
လလေ့ာမှုတှအေရတော့ ရိုငျးစိုငျးမှုကို ခံစားရတာ၊ အနညျးဆုံး ရိုငျးစိုငျးမှုကို မကျြမွငျ တှနေ့ရေတာကတောငျ အလုပျလုပျနိုငျစှမျး၊ တီထှငျဉာဏျနဲ့ အကူအညီပေးလိုမှုတို့မှာ အရမျး ထိခိုကျစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒါနဲ့တငျ အဆုံးမသတျသေးပါဘူး။
ရိုငျးစိုငျးမှုဟာ ကူးစကျတတျပါတယျ။ ဆိုလိုတာက ရိုငျးစိုငျးခွငျးဟာ ရိုငျးစိုငျးမှုနဲ့ ကွုံတှရေ့သူ၊ ရိုငျးစိုငျးမှုကို မကျြမွငျတှရေ့သူတှကေိုသာ အကြိုးသကျရောကျစတော မဟုတျပဲ ဆငျ့ပှားအကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။ ရိုငျးစိုငျးတဲ့ အပွုအမူ ကွုံခဲ့ရသူတှဟော သူတို့ကိုယျတိုငျ ရိုငျးစိုငျးသှားကွပွီး သူတို့နဲ့ ထပျမံတှဆေုံ့ရတဲ့ လူတှအေပျေါပါ ရိုငျးနဦေးမှာပါ။
ဘာကွောငျ့ ရိုငျးစိုငျးမှုက တဈယောကျကနေ တဈယောကျ ကူးစကျကွတာလဲ
စိတျခံစားခကျြတှနေဲ့ အပွုအမူတှကေ ကူးစကျတတျပါတယျ။ သငျ့ပါတျဝနျးကငျြကလူတှေ ပြျောနရေငျ သငျလဲ ပြျောလာမှာပါ။ ပါတျဝနျးကငျြကလူတှအေားလုံး လကျပိုကျနရေငျ၊ ဒူးနှံ့နရေငျ သငျလဲ လိုကျလုပျမိမှာ အသအေခြာပါ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒိအကြိုးသကျရောကျမှုတှကေ သငျ အမှတျတမဲ့ လိုကျလုပျမိတာပဲဆိုတော့ ရိုငျးစိုငျးမှုက ဘာကွောငျ့ သငျ့ကို ပိုရိုငျးစလေဲဆိုတာ ပွောမပွနိုငျပါဘူး။ အဲဒိတော့ အဲဒါ ဘာကွောငျ့ ဖွဈတာလဲ??
သငျ လူမှုရေးလှုံ့ဆျောမှု တဈခုခု လုပျတဲ့အခါ ( ဥပမာ လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ စကားပွောတဲ့အခါ) ဦးနှောကျရဲ့ နကျရှိုငျးတဲ့ မသိစိတျအပိုငျးမှာရှိတဲ့ အသိတဈခြို့ကို လှုံ့ဆျောပေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒိ အသိဆိုတာ အမြိုးမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ ဒေါသ၊ ပြျောရှငျခွငျး၊ ဝမျးနညျးခွငျး၊ ခှနျအားနဲ့ ရိုငျးစိုငျးခွငျးတို့ပါ။ အဲဒိ အသိတှေ ပှငျ့လာတာကို ကြှနျတျောတို့ သတိမထားမိပါဘူး။ အဲဒိ အသိတှထေဲက တဈခုခု ပှငျ့လာရငျ ကြှနျတျောတို့ ကမ်ဘာကွီးကို ဆကျဆံတဲ့ ပုံစံလဲ အသိနဲ့ လိုကျပါပွောငျးလဲသှားပါတယျ။
ရိုငျးစိုငျးတဲ့ အသိ ပှငျ့လာရငျ သငျ ခံစားရတဲ့ လူမှုရေးလှုံ့ဆျောမှုကို ပိုပွီး ရိုငျးတယျ ထငျလာမှာပါ။ ရိုငျးစိုငျးမှု ခံစားရတဲ့ သူတှဟော ပါတျဝနျးကငျြက ရိုငျးစိုငျးမှုတှကေို ပိုမို သတိပွုမိလာကွပွီး တဈလောကလုံးက သူ့ကို ရိုငျးနတေယျလို့ ထငျလာကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သူတို့ကလဲ တုံ့ပွနျရိုငျးစိုငျးလာရတာပါ။
အဲဒိ ဖွဈစဉျက အလိုအလြောကျ ဖွဈတဲ့အရာမို့ ပိုပွီးကွောကျစရာကောငျးတာပါ။ ဦးနှောကျထဲမှာ အလိုလို ဖွဈသှားတဲ့ ဖွဈစဉျကို သငျ ဘာမှ မထိနျးခြုပျနိုငျပါဘူး။
တဈခုတညျးသောနဲ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ သငျ ဘာပဲ ကွုံရကွုံရ မရိုငျးပါနဲ့။ သငျ့ကို လူအားလုံးက စျောကားနတောလဲ မဟုတျပါဘူး။ အတတျနိုငျဆုံး ရိုငျးစိုငျးသူတှနေဲ့ မဆကျဆံပါနဲ့။ အရိုငျးခံရရငျတောငျ ပွနျမရိုငျးဖို့ ကွိုးစားပါ။
Previous: အပြာကားတွေ ခေတ်မစားခင်က အရသာ
Next: ဇနီးလောင်းကို ပေးထားရမယ့် ကတိ(၁၀)ခု